Global Voices teny Malagasy » Hindi: Rano, daoty, tsenam-bola sy ny hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2018 3:40 GMT 1	 · Mpanoratra Amit Gupta Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta
Zavatra miantraika amintsika rehetra ny fiakaran'ny maripàna. Na dia eo aza izany, misy ireo hevitra samihafa. Mihevitra ny sasany fa zava-dehibe tena mampanahy izany ary tokony hanao zavatra momba izany raha mihevitra kosa ny sasany fa tsy olana goavana na manahirana izany ary misy koa ireo tsy mihevitra izany mihitsy ho olana lehibe ! Dr.Mandhata Singh nitatitra  fa hilentika ao amin'ny Oalan'i Bengal  i Kolkata  (Calcutta taloha), tanàna moron-dranomasina any atsinanan'i India sy renivohitra India Britanika taloha, afaka 30-100 taona raha mitohy ny fiakaran'ny maripàna ary mitohy amin'ny tahany ankehitriny ny fiempon'ny ranomandry Himalayana. Milaza izy fa mitovy amin'izany ny mety mahazo an'i Sundarbans  araka ny filazan'ny fikambanana sosialy NEWS (izay miasa ho an'ny mahasoa ny Sundarbans) sy ny Departemantan'ny Siansa An-dranomasina ao amin'ny Oniversiten'i Calcutta.
Milaza amin'ny tsirairay i Ravi Ratlami fa afaka omena baiko amin'ny teny Hindi ankehitriny amin'ny solosaina. Nilaza izy fa hatramin'izao, azo jerena ao amin'ny Unix sy Linux ihany izany, saingy ankehitriny izany hita ao amin'ny Microsoft Windows ihany koa, amin'ny fampiasana ny fitaovana antsoina hoe PowerShell  avy amin'ny Microsoft. Milaza izy fa mbola amin'ny teny Anglisy ny baiko ary raha te hampiasa baiko amin'ny teny Hindi, dia tokony hamorona “alias” ho an'ny baiko teny anglisy ary nasehony niaraka tamin'ny ohatra amin'ny fomba famoronana alias hanokafana Notepad ary manokatra izany amin'ny famoahana ny baiko amin'ny teny Hindi. Azo ampiasaina amin'ny PowerShell tahaka izany koa ireo teny toka-kaody (unicode).
Ary toa araka ny fahitana azy, tsy mandeha tsara ny zava-drehetra any amin'ny Tsenam-bola manerana izao tontolo izao ary tahaka izany ny mitranga ao amin'ny tsenam-bola Indiana roa lehibe; BSE (Bombay Stock Exchange) sy ny NSE (National Stock Exchange). Araka ny tatitra nataon'ny Sauda Bazaar , tafiditra anaty lisitra tamin'ny Alatsinainy ny taratasim-bolan'ny Reliance Power  notarihan'i Anil Ambani , fa niteraka dona lehibe manerana ny tsena izany satria nandrakitra ny fahaverezana fahatelo lehibe indrindra tao amin'ny tsenan'ny BSE sy ny fatiantoka faha-efatra lehibe indrindra tao amin'ny NSE. Diso fanantenana ireo mpividy, na ireo tavela tamin'ny fampidiran-tsanda tao amin'ny Tsenambola (IPO) na ireo te-hividy bebe kokoa noho ny sandan'ny Reliance Power nosokafana tamin'ny sanda Rs.530 (Rs.450 izany tamin'ny fampidiran-tsanda voalohany tao amin'ny Tsenambola) ary dia nidina tsikelikely nandritra ny tontolo andro. Nihintsana be toy izany ihany koa ny orinasa rahavavin'ny Reliance Energy satria natomboka tamin'ny vidiny Rs.1965 ny taratasimbola ka rehefa niakatra Rs.20 kely, dia nitohy nihena hatrany mandra-pahatongan'ny hariva ary nikatona tamin'ny vidiny Rs.1582.30. Amin'ny ankapobeny, ankoatra ny orinasan'ny teknolojiam-pifandraisana, dia nahita fihenan-danja tamin'ny sandan'ny tahirim-bola avokoa ny rehetra ary heverina fa mbola hitohy ny fihenana ao an-tsena mandritra ny herinandro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/30/120261/
 Dr.Mandhata Singh nitatitra: http://apnamat.blogspot.com/2008/02/blog-post.html
 Oalan'i Bengal: http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Bengal
 Nitantara zava-nitranga harivariva i Gyandutt Pandey : http://hgdp.blogspot.com/2008/02/blog-post_12.html
 Ravi Ratlami : http://raviratlami.blogspot.com/2008/02/blog-post_12.html
 Reliance Power: http://en.wikipedia.org/wiki/Reliance_Power
 Anil Ambani: http://en.wikipedia.org/wiki/Anil_Ambani